Wakiilada Sales, Adeegyada Maaliyadeed Job Description / Waajib Sample Oo Functions - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Wakiilada Sales, Adeegyada Maaliyadeed Job Description / Waajib Sample Oo Functions
Yacquub June 28, 2016 Uncategorized 4 Comments 1,530 Views
Kor adeegyada dhaqaale-, sida tusaale ahaan mortgage, levy, iyo maal hanuun macaamiisha hay'adaha bangiyada iyo shirkadaha shirkadda.
Go'aanso adeegyada maaliyadeed baahida shoppersA iyo diyaariyaan talooyin u bixiyaan adeeg bixiyayaasha in ay beegsadaan shuruudahan.
La xiriir macaamiisha si ay u bixiyaan xaqiiqooyin iyo tilmaami xal in la bixiyaa.
marsho Iibiya ama adeegyada, hantida, sida trusts, ama fiiri adeegyada processing.
Diyaari heshiisyo ama cayn ku dhammayn lahaa dakhliga.
La helo rajada ka soo jeedin keentaa, macaamiisha dhawaan warshadaha, ama dakhli ama ganacsi kulan.
Qiimee badnaanta shirkadda soo jeedinaya dukaameeysatada ku saabsan isbedbedelka la filayay.
Abuur shows ku saabsan adeegyada maaliyadeed-ka koox koox si ay sasabtaan purchasers cusub.
Qiimee faa'iidada iyo lacagta ee qabanqaabada si loo go'aamiyo faa'iidada la sii.
Task Jadwalka joogtada u Baahan
Akhrinta weedho fahamka-Fahamka iyo cutubyada ku qoran waraaqaha la xiriira shaqada.
Active-Dhageeysi-To waxa kale-dadka caddayn siinta dhamaystiran dareenka,, waqtiga iyo tamarta ah in la aqoonsado dhibcood ka qaadan lagu dhigay, arrimaha weydiinaya sida ku habboon, halkii ay ka joojiyeen waqtiyo aan habboonayn.
Publishing-Written hoos ma aha sida aan habboonayn ee baahida daawadayaasha la hadlaya oo si hufan,.
Sheekaysiga-hadalka dadka kale si ay ula wadaagaan xogta ku ool ah.
Research-Isticmaalka xeerarka gacanta iyo xalalka si aad u daaweyso dhibaatooyinka.
Halis ka fakaraya-Isticmaalka xukunka iyo ku fikiray si loo ogaado xirfadaha iyo khasaaraha beddeli bedel, gunaanad ama siyaabo arrimaha.
Active Learning-Aqoonta lugaha xaqiiqooyinka in waa cusub oo ku saabsan labada xalinta dhibaatada iyo go'aan-qaadasho ee hadda jira iyo kuwa mustaqbalka.
Barashada Xeeladaha-shaqaalayn iyo qaadaaya dhaqamada iyo hababka coachingOReducational haboon dhibaatada aad bartid ama marka arrimaha ku cusub barashada.
Monitoring-Monitoring / oolnimada Qiimaynta ganacsiga, dadka kale ee, ama adiga laftaada ayaa ka fiirsan tallaabooyinka sixid ah ama in ay soo saaraan horumarka.
Social Perceptiveness-In ka dhawrsada kuwa kale’ jawaabaha sida ay sameeyaan sababta ay fal iyo waxgarasho.
falalka Control-beddelidda ee la xiriirta tallaabooyin othersI.
Salesmanship-qanciyo dadka kale si loo horumariyo caadooyin ama maskaxdooda.
Dood-qaadashada dadka kale si wadajir ah oo doonaya in ay heshiiyaan.
dadka kale, Taakulada-Baridda loogu taraaroxo wax samayn.
Orientation-ahaantii Service raadinaya habab si loo caawiyo dadka.
Advanced Lagu Xallinayo Dhibaatada-kala arrimaha adag iyo macluumaadka cilmi baarista la xiriira in ay soo saaraan iyo baari beddeli iyo hirgelinta fursadaha.
shuruudaha iyo shuruudaha item Hawlgallada Qiimeynta-Falanqaynta si ay u abuuraan style a.
qalabka ama dhalin iyo teknoolajiyada si ay u shaqeeyaan shakhsiga u baahan Engineering Design-Beddelidda.
Tools Selection-Go'aansiga nooca qalab iyo qalabka loo baahan yahay si dhab ah si ay u fuliyaan shaqo.
fiilooyin wajigeeda-xiridda, qalabka, alaabta, ama baakadaha in guud ahaan la kulmaan Details.
-Curinta codsiyada computer sababo kala duwan.
qiimaynta Operation Tracking-kuurgalo, wicitaanada, ama calaamado kala duwan si loo hubiyo in qalabka ayaa hadda si habsami ah.
hawlgallada aaladaha ama qalabka Operation iyo Control-Xakamaynta.
Qalabka Dayactirka-Sameynta adeegyada waa joogtada ah ee qalabka iyo aqoonsashada marka.
sababo dhib-Aqoonsiga for khaladaad shaqada iyo xulashada waxa jihada si ay u tagaan oo ku saabsan wax kasta oo ka mid ah.
qalabka ama hababka loo adeegsado hababka lagama maarmaanka ah si qamaar-hagaajinta.
qiimaynta iyo qiimeynta badeecadaha Quality Control-imtixaanka-fulinta, xal, ama hawlaha in lagu qiyaaso fiican ama hufnaan.
Xigmad iyo go'aan-qaadasho-Qaadashada tixgelin lacagta guud iyo faa'iidooyinka ka mid ah tallaabooyinka laga yaabo in ay doortaan mid ka mid ah ugu habboon.
Systems Falanqaynta-Go'aaminta sida nidaam lagu sameeyo iyo isbedel kaliya sida in xaaladaha, ganacsiga, oo ay la socdaan deegaanka saamayn ku yeelan karaan gargaarka.
Hababka Falanqaynta-Aqoonsiga tallaabooyinka ama tilmaamayaasha waxqabadka nidaamka iyo qaraabo in ay bartilmaameed mashiinka sax ah ama talaabooyinka loo baahan yahay si dhab ah si kor loogu qaado waxqabadka.
Time Management-Maareynta xaadirka ah ee dadka kale iyo sidoo kale oneis muddo shakhsiyeed.
Hawlgalka of Money-Aqoonsiga sida dollars loo isticmaali doonaa si ay u helaan shaqo u sameeyaa, iyo iibka ku saabsan kharashyada kuwan.
Hawlgallada ee Qalabka Ilo-In qofka oo markuu arkay in isticmaalka haboon ee alaabta shirkadaha, iyo qaybaha qalabka loo baahan yahay si dhab ah in la sameeyo si gaar ah u shaqeeyaan.
Management of Workers Resources-ujeedadu waawayn halka ay, isuna, iyo shaqada xiiso, go'aaminta ee waawayn top shaqada.
Heerka Dugsiga Sare (ama GED ama dugsiga sare ee Certification isu-)
Link ee Stage (ama dheeraad ah marxalad LABO sano ah)
In ka badan 2 sano, A.villa oo ay ku jiraan dhowr sano
Career Authority Skills Horudhac ah
Success / Energy – 92.45%
Tenacity – 91.65%
Gargaarka – 94.20%
Arrinta ku saabsan Kuwo kale – 93.53%
Sinaanta Bulshada – 88.84%
Is-Control – 94.37%
Dulqaadanayn Stress – 93.55%
Wacyigelinta ee Detail – 94.80%
Fikirka – 88.52%
Certificate (SSC) qiimaynta. Secondary School Certificate is the complete type of
Pingback: Is Medical Transcription Obtaining Career For You? – Sida aan dhashay
Pingback: The Future Hold For Cna Jobs – khudaar-qarsoodiga